Imvamisa edingekayo yokuzihlola kwamazinga kashukela ngohlobo 2 sikashukela > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Isifo sikashukela yisifo esingelapheki, okungukuthi, singelapheki, kepha siyakwazi futhi kufanele silawulwe! Kuyadingeka ukulandela ukondleka okufanele, ukuzivocavoca njalo noma ukuhamba nje, izivivinyo zokuzivocavoca, uma kunesidingo, phuza umuthi, kodwa njengoba kuyalelwe udokotela kuphela.
Kuzwakala kukuhle, kepha nansi indlela yokuthola ukuthi lokhu kwelashwa kuyasiza yini? Ngabe konke lokhu sekwanele? Noma mhlawumbe, okuphambene nalokho - imizamo ngokweqile iholela ekunciphiseni kweglucose yegazi ngaphansi kwesejwayelekile, kepha azikho izimpawu.
Ngemuva kwakho konke, njengoba wazi, isifo sikashukela siyingozi ezinkingeni zalo ezinkulu.
Ukuthola ukuthi ulawula ngempela ushukela wakho, kufanele usebenzise indlela elula kakhulu - ukuzihlola ushukela wegazi. Kwenziwa kusetshenziswa ithuluzi le-glucometer futhi likuvumela ukuthi uthole ukuthi yiliphi izinga likashukela wegazi ngesikhathi esinikeziwe, esithile. Kepha ukukalwa nini futhi kanjani?
Iziguli eziningi ezinesifo sikashukela zikholelwa ukuthi ukukalwa kwegazi kungaphezu kwamandla, futhi udinga ukusebenzisa imitha kuphela uma uya kudokotela, uzobuza: "Ngabe ulinganisa ushukela wegazi? Ushukela muni osesiswini esingenalutho namuhla? Kwesinye isikhathi?". Futhi sonke isikhathi, ungangena - akukho mlomo owomile, awuvami ukuya endlini yangasese, ngakho-ke kusho ukuthi "ushukela uvamile."
Khumbula nje, lapho kwatholakala ukuthi unesifo sikashukela, kwenzeka kanjani lokhu? Ngabe uyazibona izimpawu futhi weza ukuzonikela ngegazi ushukela ngokwakho? Noma kwenzeka ngengozi?
Noma ngisho nangemva kokuhlolwa ngokuphelele nokuhlolwa okukhethekile "ushukela ocashilewe" - isivivinyo esinomthwalo wama-75 g kashukela? (bheka lapha).
Kepha uzizwa kabi ngoshukela wegazi osheshayo, isibonelo, 7.8-8.5 mmol / l? Futhi lokhu ushukela omningi impela, olimaza imithambo yegazi, izinzwa, amehlo nezinso, uphazamisa ukusebenza komzimba wonke.
Cabanga ukuthi yini ebalulekile kuwe? Impilo yakho, inhlala-kahle nempilo ephelele?
Uma ufuna ngempela ukufunda ukuphatha ushukela wakho ngokwakho, ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga, kubalulekile ukuqala ukubheka ushukela wegazi njalo! Futhi akusikho neze ukuthi uphinde ubone isithombe esihle bese ucabanga ukuthi "kusho ukuthi awudingi ukukala ngaphezulu / amaphilisi okuphuza" noma ukubona okubi futhi uphatheke kabi, uyeke. Cha!
Ukulawulwa kweshukela elifanele kuzokwazi ukukutshela okuningi ngomzimba wakho - mayelana nokuthi lokhu noma lokho kudla okuthathile kulithinta kanjani i-glucose level yakho, umsebenzi womzimba - noma ngabe ukuhlanza ifulethi noma ukusebenza engadini, noma ukudlala imidlalo ejimini. ukusho ukuthi imithi yakho isebenza kanjani, mhlawumbe - kufanelekile ukuyishintsha noma ukuyiguqula irejimeni / umthamo.
Ake sibheke ukuthi ngubani, nini, kangaki futhi kungani ushukela wegazi kufanele ulinganiswe.
Iningi labantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 balinganisa amazinga kashukela egazi kuphela ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni - esiswini esingenalutho.
Kunjalo nje isisu esingenalutho sibonisa isikhathi esincane sosuku - amahora angu-6-8, okuyinto olala ngayo. Futhi kwenzekani emahoreni angu-16-18 asele?
Uma usalinganisa ushukela wakho wegazi ngaphambi kokulala nangosuku olulandelayo esiswini esingenalutho, khona-ke ungahlola ukuthi ngabe izinga likashukela egazini liyashintsha ubusuku bonkeuma izinguquko, kanjani. Isibonelo, uthatha i-metformin kanye / noma ne-insulin ubusuku bonke. Uma ushukela wegazi osheshayo uphakeme kancane kunokuhlwa, khona-ke le mishanguzo noma umthamo wabo awunele. Uma, Ngokuphambene nalokho, izinga likashukela wegazi liphansi noma likhulu ngokweqile, khona-ke lokhu kungakhombisa umthamo we-insulin omkhulu kunokuba udingeka.
Ungase futhi uthathe izilinganiso ngaphambi kokunye ukudla - ngaphambi kwasemini naphambi kokudla kwakusihlwa. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi uma usanda kunikezwa izidakamizwa ezintsha ukuze wehlise ushukela wegazi lakho noma uma uthola ukwelashwa kwe-insulin (kokubini nge-basal ne-bolus). Ngakho-ke ungalinganisa ukuthi izinga le-glucose esegazini liguquka kanjani phakathi nosuku, ukuthi ukusebenza komzimba noma ukungabikho kwalo kuthinteka kanjani, ukudla okulula komzimba nokunye.
Kubaluleke kakhulu ukuhlola ukuthi ama-pancreas akho asebenza kanjani ekuphenduleni isidlo. Kwenze kube lula kakhulu - sebenzisa i-glucometer ngaphambili kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla. Uma umphumela "ngemuva" ungaphezulu kakhulu kunomphumela "ngaphambili" - okungaphezulu kuka-3 mmol / l, ke kufanelekile ukuxoxa nodokotela wakho ngalokhu. Kungaba yinzuzo ukulungisa ukudla noma ukuguqula ukwelashwa kwezidakamizwa.
Lapho kungenye futhi kufanelekile ukukala izinga le-glucose egazini:
lapho uzizwa kabi - uzizwa enezimpawu ze-glucose ephezulu noma ephansi,
uma ugula, ngokwesibonelo - unokushisa okuphezulu komzimba,
ngaphambi kokushayela imoto,
ngaphambi, phakathi nangemva kokuzivocavoca. Lokhu kubaluleke kakhulu uma usuqala ukuzibandakanya nomdlalo omusha wakho,
ngaphambi kokulala, ikakhulukazi ngemuva kokuphuza utshwala (mhlawumbe ngemuva kwamahora ama-2-3 noma kamuva).
Vele, ungasho ukuthi ukwenza izifundo eziningi kakhulu akumnandi kakhulu. Okokuqala, kubuhlungu, futhi okwesibili, kubiza kakhulu. Yebo, futhi kuthatha isikhathi.
Kepha akudingeki ukuthi wenze izilinganiso ze-7-10 ngosuku. Uma unamathela ekudleni noma wamukela amaphilisi, khona-ke ungathatha isilinganiso izikhathi eziningana ngesonto, kepha ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku. Uma ukudla, imishanguzo isishintshile, khona-ke okokuqala kufanelekile ukukala kaningi ukuhlola ukusebenza kanye nokubaluleka kwezinguquko.
Uma uthola ukwelashwa nge-bolus kanye ne-basal insulin (bheka isigaba esivumelanayo), ngakho-ke kuyadingeka ukuhlola izinga le-glucose yegazi ngaphambi kokudla ngakunye nangesikhathi sokulala.
Yini imigomo yokulawula ushukela wegazi?
Zingabantu ngazinye futhi zincike eminyakeni yobudala, ubukhona kanye nobunzima bezinkinga zikashukela.
Ngokwesilinganiso, amazinga we-glycemic okuhloswe ngawo:
esiswini esingenalutho 3.9 - 7.0 mmol / l,
Amahora ama-2 ngemuva kokudla nesikhathi sokulala, aze afike ku-9 - 10 mmol / L.
Imvamisa yokulawulwa kwe-glucose ngesikhathi sokukhulelwa ihlukile. Njengoba izinga elikhuphukile loshukela egazini lithinta kabi ukukhula kwesibeletho, ukukhula kwalo, phakathi nesikhathi sokukhulelwa, kubaluleke kakhulu ukuligcina yena ngaphansi kolawulo oluqinile!Kuyadingeka ukuthatha izilinganiso ngaphambi kokudla, ihora emva kwayo naphambi kokulala, kanye nangempilo engeyinhle, izimpawu ze-hypoglycemia. Amanani weglucose okuqondisiwe ngesikhathi sokukhulelwa nawo ayahluka (imininingwane engaphezulu ..).
Kusebenzisa idayari yokuzihlola
Idayari enjalo ingaba incwadi yokubhalela eyenzelwe lokhu, noma iyiphi incwadi yokubhalela noma incwadi yokubhalela ekufanele. Embhalweni, qaphela isikhathi sokulinganisa (ungakhombisa inombolo ethile, kepha kulula kakhulu ukubhala amanothi "ngaphambi kokudla", "emva kokudla", "ngaphambi kokulala", "ngemuva kokuhamba." Eduze kwakho ungamaka ukubanjwa kwalokhu noma lowomuthi, mangaki amayunithi we-insulin wena uma uyithatha, hlobo luni lokudla okudlayo, uma kuthatha isikhathi esiningi, bese uqaphela ukudla okungathinta amazinga kashukela egazi, ngokwesibonelo, udle ushokolethi, uphuza izingilazi ezi-2 zewayini.
Kuyasiza futhi ukuqaphela izinombolo zokucindezela kwegazi, isisindo, umsebenzi womzimba.
Idayari enjalo izoba ngumsizi obalulekile kuwe nodokotela wakho! Kuzoba lula ukuhlola ikhambi lokwelashwa naye, futhi uma kunesidingo, lungisa ukwelashwa.
Vele, kufanelekile ukuxoxa ngokuthi yini ngempela okudingeka uyibhale kudayari nodokotela wakho.
Khumbula ukuthi okuningi kuncike kuwe! Udokotela uzokutshela ngalesi sifo, akunikeze imishanguzo, kepha lapho-ke uthatha isinqumo sokulawula ukuthi kufanele unamathele ekudleni, uthathe imishanguzo ebekiwe, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi ulisebenzisa nini futhi kangaki isilinganiso seglucose egazini.
Akufanele ukuphathe lokhu njengomsebenzi osindayo, usizi lokuzibophezela oluwele ngokuzuma emahlombe akho. Yibuke ngendlela ehlukile - ungayithuthukisa impilo yakho, nguwe ongathonya ikusasa lakho, ungumphathi wakho.
Kuhle kakhulu ukubona ushukela omuhle wegazi futhi uyazi ukuthi ulawula ushukela wakho!